विद्यार्थीले सफलता प्राप्त गरेको सुन्दा खुसी लाग्छ : ईश्वरी प्रसाद लामिछाने – Contemporary News Portal From Nepal
विद्यार्थीले सफलता प्राप्त गरेको सुन्दा खुसी लाग्छ : ईश्वरी प्रसाद लामिछाने
Published at: September 28, 2016 5:45 am
लामो समय शिक्षा क्षेत्रमा सेवा गरेर अरुणिमा शैक्षिक गुठी अन्तर्गत संचालित अरुणिमा स्कुलका संस्थापक प्रधानाध्यापक ईश्वरी प्रसाद लामिछानेसंग आशाका किरणका सुदर्शन बजगाईले गरेको कुराकानीको संपादित अंश :
आरम हुनुन्छ ?
हजुर एकदमै ठिक छु ।
केमा ब्यस्त हुनुन्छ ?
बिद्यालयको अनेकन खालका गतिविधिमा ब्यस्त छु ।
दशैंले कत्तिको छोएको छ ?
छोएको छ ।
कति जनाले रोजगारी पाएका छन अरुणिमामा ?
अरुणिमाले उच्च माबि सम्ममा २५० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरिरहेको छ ।
कस्तो लाग्छ सयौंलाई रोजगारी र हजारौंलाई शिक्षा प्रदान गर्दा ?
अरुणिमा एउटा कम्युनिटि भएको छ । अरु बिद्यालयमा जाँदा हामिलाई गरेको व्यवहार र सम्मान पाउँदा र राम्रो रेस्पोन्स पाउँदा खुसी लाग्छ ।
पास आउट भएका विद्यार्थीको सफलताको कथा सुन्दा कस्तो लाग्छ ?
करिबन २९०० विद्यार्थीहरु एसएलसी पास आउट भएका छन २०७२ सालसम्म । धेरै विद्यार्थी पेसा ब्यवसायमा सफल भएका छन धेरै डाक्टर ईन्जिनियर र शिक्षण पेसामा समेत संलग्न भएर सेवा गरिरहेका छन । त्यसैगरी फुटबल क्रिकेटलमा र स्विमिङ्पुल आदिमा हाम्रा केटाकेटी सबैतिर फैलिएको देख्दा आनन्द आउने र भावबिहोर हुन मन लाग्ने हुँदो रहेछ । खुसी लाग्छ केही दिन अगाडि ठूलो टोली लिएर पोखरा घुम्दा सर भनेर बाटोमा भेटेर फोटो खिच्ने भन्दा धेरै खुसी लाग्दो रहेछ । खुसी लाग्छ ।
के छ सरको दशैंको योजना ?
म मेरो गाउँ बिराटनगर जान्छु ।
के के गर्नु हुन्छ ?
म पहिला अध्यन गरेको मोरङ कलेजम गएर पसेर एक्छिन बस्छु । हरेक पटक बिराटनगर जाँदा त्यो कलेज जाँदा खुसी लाग्छ । साहितत्यीक कार्यक्रममापनी संलग्न हुने बिचार छ । केटाकेटीसंग घुम्न जाने योजनापनी छ एक दुई दिनको । अनुकुलता मिल्दा नयाँ किताब पढ्नेपनि योजना छ ।
दशैं तिहार छठ र नेपाल संबतको सुख शान्तिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना दिन चाहन्छु ।चाडलाई पर्वलाई शौहार्दपुर्वक र शान्तिपुर्ण ढंगबाट नेपालीपन का साथ संस्कृति प्रबर्धन हुनेखालले मनावौं भन्न चाहन्छु । हाम्रो सुमुदायको मेलमिलाप र शान्तिको कुरामा जोड दिएर नेपाली संस्कृति जगेर्ना गर्ने उद्धेश्यकासाथ यस चाड मनाउनुहुन संपुर्ण नेपाली दाजुभाई दिदिबहिनीहरुमा अनुरोध गर्न चाहन्छु ।